वास्तुशास्त्र अनुसार राती सुत्दा श्रीमान र श्रीमतीले दायाँ-बायाँ कसले कतापट्टि सुत्ने ? जानी राखौ - pnpkhabar.com
You are at:Home»धर्म/दर्शन»वास्तुशास्त्र अनुसार राती सुत्दा श्रीमान र श्रीमतीले दायाँ-बायाँ कसले कतापट्टि सुत्ने ? जानी राखौ
वास्तुशास्त्र अनुसार राती सुत्दा श्रीमान र श्रीमतीले दायाँ-बायाँ कसले कतापट्टि सुत्ने ? जानी राखौ
By मनिषा थापा on ४ चैत्र २०७४, आईतवार ११:२२ धर्म/दर्शन
सुन्दा छि के होला यस्तो पनि हुन्छ र आम मानिसलाई यस्तै लाग्न सक्छ तर वास्तु शास्त्र अनुसार हाम्रो पारिवारिक जीवनमा साना सान कुराले पनि ठूलो प्रभाब पार्न सक्छ । वास्तु दोषका कारण पनि परिवारमा अनेक झमेलाहरु आइलाग्ने र परिवारमा श्रीमान् श्रीमतीको सम्बन्ध नै बिग्रदै जाने गरेको वास्तुशास्त्रका जानकारहरु बताउँछन् ।
बेडरुम सधैं दक्षिण पश्चिम वा उत्तर पश्चिम दिशातर्फ हुनुपर्छ । यसले श्रीमान् श्रीमतिबीच माया र एक अर्कालाई बुझ्ने क्षमताको विकास गर्दछ । उत्तर पूर्व र दक्षिण पूर्ण दिशामा रहेको कोठालाई कुनै पनि हालतमा बेडरुम बनाउनु हुँदैन ।